Kambodja: Fahatsiarovana Ny Fanafahana Sa Ny Fananiham-bohitra? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Oktobra 2018 6:00 GMT
Notsipihan'ny Praiminisitra Hun Sen fa ny 7 Janoary 1979 no fandresena nanoloana ny fandripahana olona faobe. Tsikerainy ireo mandà tsy hankalaza ilay fotoam-pahatsiarovana:
Saingy hazavain'i Sophan Seng ny antony tsy anarahan’ny Kambodjiana rehetra an'ilay fankalazana :
Marihan'i Modern Progressive Khmer ny fibodoan'i Vietnam an'i Kambodja taorian'ny 7 Janoary 1979:
Mihevitra ny mpanohitra fa ny 23 Oktobra 1991 no tonga ny tena andron'ny fanafahana, rehefa voasonia tany Parisy. ireo fifanarahana fandriampahalemana. Manasongadina teboka iray hafa i Sam Rainsy, solombavambahoaka an'ny mpanohitra:
Omen'ny The Son of the Empire ny famintinana voalohany an'ireo hevitra mikasika ilay olana. Nampakatra ireo sary mikasika ny fankalazana nokarakarain'ny governemanta tamin'ny herinandro lasa teo ny Khmerization.